Ingabe ingane idinga ifoni ephathekayo?
Iningi lwakamuva, ifoni ephathekayo ikwazi ukukhokhela kuphela abomabhizinisi ababehlala emgwaqweni, kodwa bebenokuthi bahlale bexhumana nabathandekayo babo. Futhi manje le ndlela yokukhulumisana akuyona ukunethezeka, kodwa ngokuphambene - isidingo.
Manje umakhalekhukhwini ungaphezu kwesethi ye-TV noma i-cafe ekuseni. Ekuseni asivuki ku-alamu ye-alamu evamile, kodwa usethe i-alamu efonini, ngoba siyazi ukuthi ngeke ikuvumele. Usuku lonke angasikhumbuza ibhizinisi futhi asihlanganise nabanye abantu. Futhi abasondelene kakhulu nabathandekayo kubantu bengqondo yizingane zethu, ezincane noma ezinkulu.
Yingakho ukhathalela futhi ubaba, uma basiza ukupakisha zonke izincwadi ezidingekayo esikhwameni, ngokuqinisekile ufake uhlangothi lwefoni ngezincwadi, ipenseli yocingo, amanzi kanye ne-apula. Isikole esikoleni esiphakeme esikoleni esiphakeme sizoya esikoleni ngaphandle kwefoni ephathekayo, ngakho-ke izinga lakhe lesibili le-zhesochtut kanye neontanga bayoqala ukumhleka usulu. Ugogo nomkhulu baxoxa ukuthi izingane zizobe zidlala ngokushesha nge-sandbox nebhakede kanye nefoni. Abazali bathi into enhle kakhulu ithengwa kumntwana kuphela ngokuphepha. Ukuze abazali bazolile futhi bazi ukuthi konke kuhambisana nomntanakho. Ngokuqinisekile uzovuma ukuthi indlela elula yokuthola ukuthi ingane ikhona kuphi ngokubiza ucingo lwakhe. Ngaphezu kwalokho, ingane ingahlala ibiza abazali uma inombuzo.
Ekuqaleni, le nqubo yayingenzelwe izingane ezincane. Futhi manje isifundo seYurophu sibonise ukuthi ngokwesilinganiso ingane ithola ifoni yakhe yokuqala eminyakeni eyisishiyagalombili. Abakhiqizi bazihlanganisa ngokushesha ngalokhu. Manje ingane ingasazi kanjani ukubhala nokufunda, kodwa kuhle kakhulu ukuthayipha ikhibhodi nokufunda igama efonini. Isibonelo, i-Siemens ikhiqiza amafoni afakwe izingane ezisuka eminyakeni emithathu ubudala. Amafoni womntwana awafani nabantu abadala. Zihlukile ezinkinobho ezinkulu nezinkinobho, ngaphandle kwalokho zinezinhlelo zokusebenza "babycall." Lapho ingane icindezela noma iyiphi inkinobho, ubiza ngokuzenzakalelayo abazali bakhe, inombolo yayo kuyoba enkumbulweni yefoni.Kunabo nalawo mafoni anezinkinobho ezintathu kuphela: "Shayela ubaba "," Shayela unina "futhi" Shayela ugogo wami. "
Wonke umuntu uyazi ukuthi izinto ezibizayo azikhanga nje kuphela abaphangi, kodwa futhi izidakamizwa zesikole. Ukuvikela ingane kulokhu okuncane, kufanelekile ukuthwala ifoni esikhwameni, ungayithwali ezandleni zakho noma endaweni evelele. Ngaphezu kwalokho, ngoba imidlalo ingane ingayishiya ifoni edeskini noma ebhaleni.
Ngaphezu kwalokho, abazali bathenga ifoni njengendlela yokukhulumisana, futhi izingane zivame ukuyisebenzisa njengethoyi. Akukona ngisho nokuthi izingane ziyakhathazeka ngesifundo ngakho-ke zidlala efonini. Ngokuyinhloko ¾ kulabo bantu abalanda okuqukethwe kwamaselula basha kanye nezingane ezincane.
Nge-voleytefon balayisha zonke izinhlobo zezibuko ze-screensavers nezithombe zokubonisa, i-anecdotes irrington, abazami ngisho nokuthola ukuthi kubiza kangakanani. Uyinike ingane - abazali, bese ubamba ikhanda uma uthola ukuthi ingane yakho isetshenziselwa imali kangakanani efonini.
Ngaphambili kwakungenzeka ukuvikela amasayithi we-porn ngokusebenzisa uhlelo "lokuhlunga". Kumelwe lufakwe kuma-computer nezithombe ezingadingeki zavele zilayishiwe, kodwa manje le nkinga ibuyile, ngoba izingane zingena efonini, kulula futhi zilula kakhulu.
Uma kungazelelwe ingane igula, uzokwazi ukuxhumana nawe.
Ngokungazelelwe umntwana uzokhishwa ngaphambi kwezifundo, uzokwazi ukukutshela ukuthi uyamthatha ekuseni kakhulu esikoleni.
Uma uhlala, ungabiza ingane, futhi ngeke akhathazeke, kodwa uzokulinda ngokuthula.
Futhi noma kunjalo, kunoma yisiphi isimo wena, futhi angabiza ngasiphi isikhathi, uma kwenzeka okuthile.
Amafoni anemidlalo namakhamera adlulisa isizukulwane esincane ekutadisheni.
Izingane zifuna ifoni hhayi ngoba ziyakudinga ngempela, kodwa ngenxa yokuthi izitayela, futhi esikhathini sethu kwakufuna ukuhlafuna i-gum ne-jeans.
Izingane zincintisana futhi zincintisana, ngakho-ke onayo ifoni eshibhile, ihlushwa ezinye zezingane.
Kunengozi yokuhlaselwa abaphangi.
Yiqiniso, ingane ihlale ifoni ngefoni ephathekayo, nganoma isiphi isikhathi ungashayela inombolo yakhe bese uthola ukuthi ukhona, nokuthi ngabe udinga usizo, mhlawumbe ngisho nokuvimbela izimo ezingathandeki, kodwa ungathengi othandekayo. Ungalimazi impilo yezingane zakho. Phela, kunezimo eziningi lapho kungabi ukweba kuphela amafoni, kodwa ukhethe ngisho nokubulala izingane. Thenga ifoni eshibhile futhi ungavumeli izinyane liziqhayise ngakho.
Ukudweba izingane: inkululeko yokudala, ukuthuthukiswa komuntu
Kungani: konke mayelana nakho konke, izimfihlo zemvelo
Izinhlelo zokuthuthukisa izingane: ukudweba
Ingane yesibili emndenini
Indlela yokususa i-chewing gum kusuka kwezinwele
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - Owesifazane wase-Scorpio - kusukela kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-terrine yenhlanzi yenkukhu nge pepper elimnandi
Ingabe isazi sengqondo somndeni singasiza ubudlelwane
Yenza ukwakheka ngesitayela se-pin-up
Isaladi ngezinkuni ze-crab, utamatisi nogalikhi
Amanzi okugeza usawoti
Usuku lokuqala: ukuthi ungaba kanjani nokuthi ubheke kanjani
Ukuthuthukiswa kwengqondo kwengane encane
Isaladi elula nge prosciutto